ဒီဘရိုင်းနားဟာ မန်စီးတီးရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အသက်သွင်းပေးနိုင်တဲ့သူပါပဲ
ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ကို မန်စီးတီး လွမ်းနေလောက်ပြီလား
29 Aug 2018 . 6:13 PM
အခုအချိန်မှာ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒကိုပြောပါဆိုရင် ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne အမြန်ဆုံး ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘရိုင်းနားဟာ အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဒူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်ကြာအောင် အနားယူရဖို့ရှိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒီဘရိုင်းနားဟာ နိုင်ငံနဲ့ကလပ်အသင်းအတွက် ဂိုးဖန်တီးမှု (၂၁)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တယ်။ မန်စီးတီး တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆု၊ Premier League Playmaker of the Season ဆုတွေ ရရှိခဲ့ပြီး ပရိးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတွေလည်း ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ မန်စီးတီးလို ကွင်းလယ်ကစားသမား ပေါများတဲ့ အသင်းမှာ ဒီဘရိုင်းနားနေရာ အစားဝင်နိုင်မယ့်သူက အဆင့်သင့်ဆိုပေမယ့် သူ့လို စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ မေးခွန်ထုတ်စရာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူပါတဲ့ ပွဲနဲ့ မပါတဲ့ပွဲတွေမှာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အနေအထားကို စစ်တမ်းထုတ် ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
ဒီ စစ်တမ်းကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဒီဘရိုင်းနား မပါနိုင်လည်း သိပ် မသိသာဘူးလို့ ထင်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချက်ချင်းစီ ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ကွာခြားချက်ကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ပျမ်းမျ အနိုင်ရာခိုင်နှုန်းက ဒီဘရိုင်းနား မပါရင် (၆၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ သူ ပါဝင်ကစားနိုင်ရင် (၆၅)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိတယ်။ သူ ကစားခဲ့တဲ့ (၉၁)ပွဲမှာ (၁၁)ပွဲသာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် မပါနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲ(၂၀)မှာတော့ (၇)ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ အသိသာဆုံးက ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီတုန်းက လိဂ်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် အဲဗာတန်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဒီဘရိုင်းနား ဒူးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ (၁၂)ပွဲလောက် မကစားနိုင်တော့ချိန်မှာ မန်စီးတီးအသင်း ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ဖလားလက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတာက သက်သေပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၃)မှာ မန်စီးတီးအသင်းဟာ တန်းတက် ၀ုလ်ဗ်ကို အနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့ဘဲ သရေတစ်မှတ်သာရရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ မန်စီးတီးအသင်းအတွက် Shock Result လို့ ဆိုရမယ်။
ပွဲစဉ်(၃)အပြီးမှာ လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ စပါး၊ ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းတွေနဲ့ (၂)မှတ် စတင် ကွာဟသွားပြီ။ ၀က်ဖို့ဒ်နဲ့ အမှတ်ကွာတာက မပြောပလောက်ပေမယ့် လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီး၊ စပါး တို့လို Level တူ အသင်းတွေနဲ့ အမှတ်ကွာတာက Danger ပါပဲ။ မန်စီးတီးအသင်းဆိုတာ ဒီဘရိုင်းနားတစ်ယောက်ထဲနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ဒီဘရိုင်းနားက အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ရမှာက ဒီဘရိုင်းနား အမြန်ဆုံး ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:The Telegraph,Talk Sports,mancitycore
ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ကို မနျစီးတီး လှမျးနလေောကျပွီလား
အခုအခြိနျမှာ မနျစီးတီးပရိသတျတှေ အဖွဈခငျြဆုံး ဆန်ဒကိုပွောပါဆိုရငျ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne အမွနျဆုံး ဘောလုံးပွနျကစားနိုငျဖို့ပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီဘရိုငျးနားဟာ အသငျးရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ဒူးဒဏျရာရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး လအနညျးငယျကွာအောငျ အနားယူရဖို့ရှိနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဒီဘရိုငျးနားဟာ နိုငျငံနဲ့ကလပျအသငျးအတှကျ ဂိုးဖနျတီးမှု (၂၁)ကွိမျပွုလုပျခဲ့ပွီး (၁၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တယျ။ မနျစီးတီး တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆု၊ Premier League Playmaker of the Season ဆုတှေ ရရှိခဲ့ပွီး ပရိးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလားတှလေညျး ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ မနျစီးတီးလို ကှငျးလယျကစားသမား ပေါမြားတဲ့ အသငျးမှာ ဒီဘရိုငျးနားနရော အစားဝငျနိုငျမယျ့သူက အဆငျ့သငျ့ဆိုပမေယျ့ သူ့လို စှမျးဆောငျနိုငျပါ့မလားဆိုတာတော့ မေးခှနျထုတျစရာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သူပါတဲ့ ပှဲနဲ့ မပါတဲ့ပှဲတှမှော မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ အနအေထားကို စဈတမျးထုတျ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
ဒီ စဈတမျးကို အမှတျတမဲ့ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ဒီဘရိုငျးနား မပါနိုငျလညျး သိပျ မသိသာဘူးလို့ ထငျစရာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တဈခကျြခငျြးစီ ပွနျကွညျ့ရငျတော့ ကှာခွားခကျြကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိပါလိမျ့မယျ။ ပမျြးမြ အနိုငျရာခိုငျနှုနျးက ဒီဘရိုငျးနား မပါရငျ (၆၀)ရာခိုငျနှုနျး၊ သူ ပါဝငျကစားနိုငျရငျ (၆၅)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိတယျ။ သူ ကစားခဲ့တဲ့ (၉၁)ပှဲမှာ (၁၁)ပှဲသာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ မပါနိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲ(၂၀)မှာတော့ (၇)ပှဲအထိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ အသိသာဆုံးက ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီတုနျးက လိဂျဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျ အဲဗာတနျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဒီဘရိုငျးနား ဒူးဒဏျရာရခဲ့လို့ (၁၂)ပှဲလောကျ မကစားနိုငျတော့ခြိနျမှာ မနျစီးတီးအသငျး ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး ဖလားလကျမဲ့ ဖွဈခဲ့ရတာက သကျသပေါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၃)မှာ မနျစီးတီးအသငျးဟာ တနျးတကျ ဝုလျဗျကို အနိုငျမကစားနိုငျခဲ့ဘဲ သရတေဈမှတျသာရရှိခဲ့တယျ။ ဒါဟာ မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ Shock Result လို့ ဆိုရမယျ။
ပှဲစဉျ(၃)အပွီးမှာ လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီး၊ စပါး၊ ဝကျဖို့ဒျအသငျးတှနေဲ့ (၂)မှတျ စတငျ ကှာဟသှားပွီ။ ဝကျဖို့ဒျနဲ့ အမှတျကှာတာက မပွောပလောကျပမေယျ့ လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီး၊ စပါး တို့လို Level တူ အသငျးတှနေဲ့ အမှတျကှာတာက Danger ပါပဲ။ မနျစီးတီးအသငျးဆိုတာ ဒီဘရိုငျးနားတဈယောကျထဲနဲ့ တညျဆောကျထားတာ မဟုတျပမေယျ့ အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ ဒီဘရိုငျးနားက အဓိက အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျနတေယျဆိုတာ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာ မနျစီးတီးပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ရမှာက ဒီဘရိုငျးနား အမွနျဆုံး ဘောလုံးပွနျကစားနိုငျဖို့ပဲ ဖွဈပါတော့တယျ . . .